Kanadiana aloha: Mpifindramonina Somali iray nahazo toerana tao amin’ny Parlemanta · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Oktobra 2015 9:30 GMT
Vakio amin'ny teny Español, русский, македонски, Magyar, Deutsch, 日本語, Français, عربي, English
Justin Trudeau nandritra ny fanentanana (fampielezankevitra), nitsidika ny mbola kandidà Ahmed Hussen tamin'izany fotoana izany tao amin'ny distrikan'i Toronto. Nahazo ny fandresena i Ahmed Hussen, ka lasa mpikambana amin'ny parlemantan'i Canada voalohany taranaka Somali. Tompon-tsary: Adam Scotti. Nahazoana alalana avy amin'ny PRI.
Ity lahatsoratra sy tatitra radio nataon'i Carol Hills ho an'i The World nivoaka voalohany tao amin'ny PRI.org tamin'ny 22 Oktobra 2015 ary nivoaka eto indray noho ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Tamin'ny 1993 i Ahmed Hussen, mpitsoaponenana 16 taona avy any Somalia, no tonga irery tao Canada. Tamin'ity herinandro ity, voafidy ho ao amin'ny parlemantan'i Canada, mpikambana voalohany indrindra avy amin'ny taranaka Somali ity mpahay lalàna mananjanaka roa ity.
“Mieritreritra aho fa tena mamaky tany vaovao izy ity,” hoy izy. “Mampiseho izao fa iray amin'ny firenena mahafinaritra indrindra manerantany i Canada fa mora tafiditra ao anatin'ny sarambabembahoaka haingana ianao ary mety ho tonga any amin'izay irinao rehetra.”
Hisolo tena ny York South-Weston, disitrika iray betsaka mpifindramonina ao Toronto i Hussen. Heverina ho mampiatrano Somali Kanadiana eo ho eo amin'ny 150.000 i Canada. “Somary zava-baovao sy tsy fahita firy izao ho an'ny fiarahamonina, Heveriko fa maro amin'ireo Kanadiana fiaviana Somali sy ny maro amin'ireo tanora niasa niaraka tamiko no mahita ity fandresena ity ho zavatra mampisy aingam-panahy azy ireo hamita zavatra bebe kokoa.”
Ny lalan'i Hussen nankany amin'ny Parlemanta dia mitovitovy amin'ny tantaran'i Horatio Alger ao Canada (I Alger dia Amerikana mpanao tantara foronina malaza amin'ny tantarany miresaka ireo zatovolahy mandositra ny fahantrana amin'ny alalan'ny asa mafy sy madio). Rehefa tonga mbola tanora avy any Somalia i Hussen dia namita ny lisea, niaraka niaina tamin'ny fianakaviana tao amin'ny fampiatranoan'ny fanjakana ary nanao ireo asa kely karama hanangonam-bola hianarana any amin'ny Kolejy [oniversite]. Nanao asa maimaimpoana ho an'ireo politisiana tao an-toerana ihany koa izy. Izay no nitarika ny fahazoany taratasy fandrisihana handraisana azy hiasa mahazo karama sy nahazoany asa ho fanohanana kandidàn'ny Antoko Liberaly izay lasa lehiben'i Ontario avy eo. Nilaozany izany hahatonga azy ho filohan'ny Kongresy Somali Kanadiana sy mpandrindra ny fikambanana. Saingy tsy nilefitra i Hussen: “Kanadiana aho aloha vao Somali faharoa.”
Raha maIaza amin'ny melting pot [fangaro am-bilany] i Etazonia, dia mitazona ny fanoharana hafa kosa i Canada : a mosaic.[Kivakivakim-bato natambatambatra]
“Ny Melting pot dia midika fa tonga ianao dia mandrapaka ao anatin'ny lavaka lehibe iray avokoa ny rehetra,” hoy i Hussen. “Ao Canada, mandrisika ny olona izahay hankafy ny lovan-kolontsainy sy ny kolontsainy saingy hamihina ihany koa ny soatoavina Kanadiana iraisana, toy ny fanajana ny zon'olombelona, ny fanajana ireo vitsy an'isa isan-karazany.”
Tahaka an'i Etazonia dia rafetin'ny olona avy amin'ny vazantany efatr'izao tontolo izao i Canada ary lazain'i Hussen fa avy amin'izany fimaroana izany no misy ny tanjaky ny firenena. “Tsy tahaka ireo firenena hafa izany mivakivaky noho ny fahasamihafam-pivavahana sy foko, dia niezala i Canada handrindra ireo fiitarana midadasika hijanonana ho matanjaka sy hiray hina na dia eo aza izany fahasamihafana rehetra izany.”
Nilaza i Ahmed Hussen fa entin'ny vondrom-piarahamonina Kanadiana-Somaliana ireo tanjany natioraly. “Manana tantara betsaka i Somalia amin'ny resaka fandraisana an-tanana, amin'ny fahasahiana manandrana mandraharaha ankianjoanjo amin'ireo toerana efa nahafaty antoka. Nentiny tany Canada ihany koa izany.” Hoy i Hussen tao Edmonton, Alberta, namelona indray ny mpiaramonina iray manontolo tamin'ny fanokafana fandraharahana madinidinika, efitra fihinanana ary tranombarotra ireo Kanadiana Somaliana.
Tsy tonga amin'izao toerana misy azy izao ny fiarahamonina Kanadiana-Somali raha tsy nisy ireo tolona isankarazany. Nisy ny tsy fananan'asa, fahantrana ary herisetran'ny tanora. Ary nilaza ireo manampahefana Kanadiana fa nahatratra na nirotsaka an-tsehatra tamin'ireo raharahan'ny tanora kanadiana nivonona na niomana hamonjy ireo fikambanana mitam-piadiana al-Shabaab miorina any Somalia ry zareo. Saingy nolazain'i Hussen fa vitsy dia vitsy ny isan'ireo tanora ireo. “Mandeha mandroso ny ankamaroan'ireo ao amin'ny vondrom-piarahamonina. Miditra sy miaraka amin'ny fokonolona. Mahazo diplaoma avy amin'ny kolejy sy ny oniversite ny tanora. Efa mihamaro ry zareo no mahazo asa sy andraikitra.”